Jaban oo rogrogmi kara Xagasha Weyn ee Wareegtada Bacriminta Alaab-qaadayaasha iyo Warshadleyda | YiZheng
Muxuu yahay Wareegtada Suunka Xagasha Weyn ee Weyn
Tani Xagal Weyn U janjeera Suunka Wareejinta wuxuu aad ugu habboon yahay boodh badeecado bilaash ah oo qulqulaya oo ku jira cuntada, beeraha, dawooyinka, qurxinta, warshadaha kiimikada, sida cunnooyinka fudud, cuntooyinka barafaysan, khudradda, khudradda, khudradda, kiimikooyinka iyo walxaha kale.
Gudaha khadka wax soo saarka bacriminta, ah Xagal Weyn U janjeera Suunka Wareejinta waxaa loo isticmaali karaa sidii qalab gaadiid ah oo lagu xiro habab kala duwan, waxaa badanaa lagu xushaa xaddidaadda booska goobta wax soo saarka, gawaarida noocan ah waxay leeyihiin qaab dhismeed is haysta si loo kordhiyo dhererka iyo awoodda gaadiidka.
Adeeg gaar ah oo loogu talagalay Wareejinta Suunka Xagasha Weyn ee Weyn
1) Bixi adeegga OEM
2) 20 sano oo khibrad ah
3) Waxaan naqshadeyn karnaa oo soo saari karnaa alaab-qaadayaha iyadoo lagu saleynayo baahidaada gaarka ah.
4) Iibinta qiimaha jaban ee qalabka dayactirka.
Astaamaha Wareegtada Suumanka Xagasha Weyn
1. Qiimaha dayactirka oo hooseeya.
2. Awood gaadiid oo ballaaran, waxayna ka fogaan kartaa walxaha si qotodheer ugu daadanaya.
3. Suunku wuxuu fududeyn karaa ka-beddelka u-wareegga gaadhsiinta iyo ka-leexashada iyo gaadhsiinta jiifka ah.
4. Waxay keydineysaa meel aad u fara badan maadaama ay u oggolaaneyso walxaha gudbiya 0-90 degree.
Muuqaal Muuqaal Muuqaal ah oo Wareejinaya Suumanka Xagasha Weyn
Xulashada Qaabdhismeedka Suunka Wareejinta Xagasha Weyn
Ku Xagasha Weyn VerWareegtada Suumanka Sidewall waxaa loo qaybin karaa T, C iyo TC iyadoo loo eegayo qeybahooda kala duwan.
•Nooca T wuxuu ku habboon yahay rabitaanka -40 °;
•Nooca C wuxuu ku habboon yahay kiisaska leh dareeraha maaddada wanaagsan ee u janjeedha β> 40 °;
•Nooca TC wuxuu ku habboon yahay u janjeedh β> 40 °, oo leh isku-dheellitirnaan ballaaran oo agab ah.
Hore: Wareejiyaha Suumanka Moobilka La qaadan karo
Xiga: Wiishka baaldiga
Noocyada 'Groove Type Composting Turner'
Hordhac Waa maxay Nooca Groove ee lagu shubo Bacaadinta Turner Turner? Mashiinka loo yaqaan 'Groove Type Composting Turner Mashiinka' waa mashiinka halsano aerobic-ka iyo qalabka rogaya compost. Waxaa ka mid ah shelf jeexdin, wadada socodka, qalabka aruurinta awooda, leexashada iyo wareejinta qalabka (inta badan loo isticmaalo shaqooyinka taangiyada badan). Shaqada porti ...
Hordhac Waa maxay Granulator Bacriminta Iskuxidhka Isku-dhafan Mashiinka Qalabaynta Bacriminta Roll Extrusion waa mashiinka kala soocida bilaa qalalan iyo qalab casri ah oo qalalan oo bilaa lacag ah. Waxay leedahay faa'iidooyinka tikniyoolajiyadda horumarsan, naqshad macquul ah, qaab dhismeed is haysta, cusbooneysiin iyo utility, tamar hooseeya ...
Hordhac Muxuu Yahay Mashiinka Qalabaynta Bacriminta Dhuxul Dhimashada? Mashiinka Gawaarida Gawaarida Fudud ee Flat Die waxaa loogu talagalay nooc iyo taxane kala duwan. Mashiinka granulator ee dhinta flat wuxuu adeegsadaa foomka gudbinta tooska ah ee hagitaanka, kaasoo ka dhigaya rullaluistemadka is-beddelka hoosta ficilka xoogga khilaafsan. Waxyaabaha budada ah waa ...